मौसमी रुघाखोकीबाट बालबालिकालाई कसरी बचाउने ? • Health News Nepal
✍️ डा. प्रदीप गुप्ता
नवजात शिशु तथा बालरोग विशेषज्ञ
१) मौसमी रुघाखोकी भनेको के हो?
मौसमी रुघाखोकी भनेको एक प्रकारको भाइरल संक्रमण हो। यो खासगरी नाक र घाँटीको संक्रमण हो। यो घातक रोग होइन । तर धेरै मानिसहरु संक्रमित हुन्छन् ।
२) यो रोग कस्तो ब्यक्तिबाट सर्दछ?
यो भाइरस संक्रमण बाट सर्छ् र एक व्यक्ति बाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने रोग हो। यो प्राय गरेर बिद्यालय् भीडभाड, हाछ्यू गर्दा , हावाबाट र संक्रमण व्यत्तिको नजिक बाट सर्दछ ।
३) कस्ता बिरामीबाट सर्न सक्दछ?
झाडापखाला , इन्फ्लुएञ्जा , रुघाखोकी , दादुरा , चिकेन पक्स , ट्न्सिल बढेका र डेङ्गूहरु लागेका बिरामीहरुबाट यो रोग सर्दछ।
४) यस रोगका लक्षणहरु :
समान्य ज्वरो आउनु ,नाक बन्द हुनु ,नाक थुनिनु , खोकी लाग्नु , समान्यतया १०० डिग्री देखि १०१ डिग्री सम्म ज्वरो आउनु , घाँटी बस्नु , आँखा बाट आँसु आउनु , हाछ्यू हाछ्यू आउनु ।
कहिलेकाहीँ झाडापखाला लाग्नु , बान्ता आउनु , जीउ दुख्नु , खाना खाने मन नलाग्नु , शरीरमा डावर आउनु ।
५) रोग लागेको कसरी थाहा पाउने ?
यो प्राय गरेर घरबाटै थाहा पाउन सकिन्छ । २ देखि ३ दिन सम्म पनि राम्रो भएन भने डाक्टर कहाँ चेकजाँच गराउने ।
६) यसको उपचार गर्ने ?
यसको उपचार लक्षण अनुसार रोकथाम गर्नुपर्दछ। खोकी लाग्यो भने खोकी सम्बन्धिको औषधि खुवाउने , जरो आयो भने जरो सम्बन्धी औषधि प्रयोग गर्न पर्छ ।
७ ) घरेलुु उपचार कसरी गर्ने ?
घरमा बच्चालाई प्रशस्त पानी खुवाउने , पानी खुवाउदा मनतातो पानी खुवाउने ,मन तातोपानीले कुल्ला हाल्ने , बाफ लगाउने , चिसोबाट बचाउने , भिटामिन युक्त फलफुल खाने , पोषिलोयुक्त खाना दिने , तुलसी पातको पानी खुवाउने ।
८) यो रोग कति दिन सम्म हुन्छ?
यो प्रायः गरेर ३ देखि ७ दिन सम्म हुन्छ। आफैं निको हुन्छ। ३ दिन भित्र सुधार भएन भने डाक्टरको परामर्श लिनुपर्छ ।
९ ) यो रोग कहिले प्राय बढ्छ ?
मौसम परिवर्तन भएमा , गर्मीयाम या हिउँदमा हुन्छ, प्राय गरेर र वर्षादको समयमा बढी हुन्छ।
१०) कस्तो समयमा डराउनु पर्छ?
बच्चामा खोकी तथा जरो आएको तीन दिनभित्र राम्रो भएन भने , झाडापखाला लाग्यो भने , पानी कम खायो भने दिशामा रगत देखा परेमा, बान्ता आएमा र बच्चा थकित भएको अवस्थामा
११) यो रोगबाट कसरी बचाउने ?
भाइरल संक्रमण भएको व्यक्ति बाट टाढा रहने , माक्स स्यानिटाइजरको पटकपटक प्रयोग गर्ने , समय समयमा साबुन पानीले हात धुने , पोषण युक्त खाना खाने , इन्फ्लुएञ्जाको खोप लगाउने , विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुसार ५ बर्ष मुनिको बच्चालाई हरेक वर्ष एकपटक फ्लु खोप लगाउने , हाछ्यू गर्दा रुमालको प्रयोग गर्ने पानी प्रशस्त मात्रामा खाने , नियमित रुपमा सरसफाइ गर्नुपर्दछ।
Tags: Cold seasoncommon ColdCorona Virus #Covid19Dr.pradip gupta
Pingback: रुघाखोकीमा‌ प्राकृतिक उपचार #NaturalRemedy #CommonCold • Health News Nepal
Pingback: जाडोमा यी गल्ती गरेमा भइएला बिरामी #WinterHealth • Health News Nepal